‘वर्तमान सरकारको लोकप्रियतालाई देखेर आत्तिएकाहरुले नकारात्मक सन्देश फैलाएका हुन्’: प्रधानमन्त्री ओली — donnews.com
प्रधानमन्त्रीको रमाईलो पारा :प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पार्टीका नेता कार्यकर्ता र समर्थकहरूलाई विभिन्न ढंगले उत्साहित गर्ने क्रममा ताप्लेजुङको घुन्सामा हेलिप्याडमा नेता कार्यकर्ताको तस्बिर खिच्दै । तस्विर साभारः सूर्य थापाको ट्वीटरबाट
ताप्लेजुङ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकारविरुद्ध भइरहेका भ्रमपूर्ण प्रचारको पछि नलाग्न सबैमा आग्रह गर्नुभएको छ । वर्तमान सरकारको लोकप्रियतालाई देखेर आत्तिएका विभिन्न पक्षले सरकार परिवर्तन हुँदैछ भन्ने जस्ता नकारात्मक सन्देश फैलाएको जनाउँदै प्रधानमन्त्री ओलीले यस प्रकारका हल्लाको पछि नलाग्न आग्रह गर्नुभयो ।
घुन्सा जस्तो दुर्गम गाउँ आगामी तीन वर्षमा नै सुगममा परिणत हुने बताउँदै यस क्षेत्रको विकासका लागि यातायातलगायत पूर्वाधार निर्माणमा सरकारले सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ । फक्ताङलुङ गाउँपालिका– ६ घुन्सामा स्थापित सामुदायिक स्वास्थ्य एकाइ भवनको आज उद्घाटन गर्दै उहाँले हालसम्म कञ्चनजङ्घामा आउने पर्यटकका लागि लिनुपर्ने विशेष अनुमति प्रावधान खारेज गरिने र तिनका लागि सो क्षेत्र खुला गरिने बताउनुभयो । घुन्सावासीले राखेका विभिन्न मागलाई सरकारले ध्यान दिनेसमेत उहाँको भनाइ थियो ।
आज यस अत्यन्तै दुर्गम ठाउँमा नै भनौ, ताप्लेजुङको यस घुन्सामा आउने मौका मिल्यो । धेरै मेहनत र कोशिस गरेर नै हामीले यो अवसर जुटायौं । यस ठाउँमा आइपुग्दा मलाई हिमाल चढ्न त गाह्रो छ, तर हिमाल देखिएको छ, यो देख्दा नै आनन्द लागेको छ । यो ठाउँ यत्तिको विकसित भएको पाउँदा मलाई एकदमै खुशी लाग्यो । घुन्सा फाउन्डेशनका अध्यक्ष याङजोङ शेर्पाको पहलमा यो स्वास्थ्य चौकी पनि निर्माण भएको छ । बस्ने क्वार्टर पनि निर्माण भएको छ । अनलाइन क्लासहरु चलाउने भवन पनि निर्माण भएको छ । त्यसैगरी यहाँ विद्युत पनि आएको छ । खानेपानीको व्यवस्था पनि यहाँ भएको छ । संचार सुविधा आइसकेकोे छ । अनलाइन क्लास चल्नेसमेत स्थिति भएको छ । टुजी सेवालाई छिट्टै फोरजी सेवामा स्तरोन्नति गरी संचालन गर्ने साथीहरुले भन्नुभएको छ । जेहोस् फोरजी सेवा पनि संचालन हुँदैछ । अब यहाँ मोटरेवल बाटोले जोड््ने कुरा टिपताला पास र उता दक्षिणमा… आउँछ । त्यहाँ जोड्ने कार्य भइरहेको छ । चीनतिर पनि बाटो खुलिसकेको छ । यता हाम्रोपट्टि पनि ट्रयाक खोल्न ६ किलोमिटर मात्रै बाँकी छ, अरु खुलिसकेको छ । यसलाई स्तरोेन्नति गर्ने, ग्राभेल गर्ने र कालोपत्रे गर्ने काम तीन वर्षभित्रै सकिन्छ । त्यसपछि ब्ल्याकड्रप(कालोपत्रे) गर्ने काम हुन्छ । तीन वर्षभित्र यी सुगम ठाउँहरु हुन्छन् ।|
म तपाईंहरुलाई खुशी व्यक्त गर्न चाहन्छु । यति दुर्गम ठाउँमा अब यहाँ संचार सेवा आइपुगेको छ । विद्युत सेवा आइसकेको छ । आधारभूत विद्यालय छ । र, यहाँ विरामीहरुले उपचार पाउने स्थिति बनेको छ । स्वाभाविक रुपमा यहाँ प्राथमिक खालकै उपचार सेवा प्राप्त हुने हो । किनभने यहाँ सुविधासम्पन्न उपचार हुने त होइन । तर पनि केही नभएको यस ठाउँमा यस स्तरको व्यवस्था गरिएको पाउँदा अत्यन्त खुशी लागेको छ । यहाँ आयोडिनयुक्त नुन नहुँदाखेरी समस्याहरु रहेका छन्, त्यसलाई ध्यानमा राखेर अब आयोडिनयुक्त नुन उपलब्ध गर्ने व्यवस्था हुँदैछ । त्यसले विभिन्न स्वास्थ्य समस्याहरुलाई ठीक गर्छ । त्यतापट्टि पनि ध्यान गएको छ । भर्खरै मलाई मेरी श्रीमतीले विद्यालयमा छात्रावृत्तिको लागि ५ लाख रुपियाँ सहयोग गर्ने भनेर भनेकी छन् । उत्कृष्ट, गरिब, जेहेन्दार विद्यार्थीहरुले त्यसबाट छात्रवृत्ति पाउन सकुन् । यसबाट लगभग त्यसबाट ५ जना बालिका र ५ जना बालक गरी १० जनलाई छात्रावृत्ति दिन सकिन्छ । यो व्यवस्था विद्यालयले मिलाउने काम गरोस् । विद्यालयका पुराना शिक्षकहरु लोकथान प्रसाईं, एलसी गुरुङलाई मैले यहाँ देखिराखेको थिएँ । तपाईंहरु पुराना शिक्षकहरु हुनुहुन्छ । यहाँहरुले त्यसको समुचित प्रबन्ध गर्नुहुनेछ भन्ने मैले ठानेको छु । यहाँ हस्पिटल हामीले हे¥यौं, कम्मल रहेनछ । त्यसकारण १० वटा कम्मल उपलब्ध गराउने भनेर मेरी श्रीमतीले भनिदिनू भनेकी छन् । १० वटा ब्लाङकेटहरु यहाँ उपलब्ध गराइनेछ । यी त ससाना कुराहरु भए । व्यक्तिगत रुपमा उनले गर्ने कुराहरु मात्रै भए ।
म साथीहरुलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, हामी उत्साहका साथ देश विकासको काममा लागौं । यहाँ राजनीतिक पार्टीहरुमा रुचि राख्ने र क्रियाशील साथीहरु पनि हुनुहुन्छ होला । अहिले सरकार चलाइरहेको पार्टीभित्र अनेक प्रकारका, कहिले पार्टी अध्यक्षका विरुद्ध, कहिले प्रधानमन्त्रीका विरुद्ध, कहिले लिखित, र कहिले छापेर त्यस्ता सामग्री वितरण गरिएका । सरकार ढलिहाल्छजस्ता कुराहरु तपाईंहरुले सुन्नु भएको हुनसक्छ । केही केही मान्छेहरु, केही काम नपाएका मान्छेहरु, देशमा अस्थिरता चाहने मान्छेहरु, देशलाई स्थिरतामा जान नदिन खोज्ने मान्छेहरु र देशको प्रगति हेरेर तर्सिएका मान्छेहरुले यसो गरिरहेका छन् । हामीले देशको भूभाग समेटेर नक्सा छापेका छौं । सुदुरपश्चिम प्रदेशको दार्चुला जिल्लामा अवस्थित लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीसहित हाम्रो छुटेको जमिन हामीले नक्सामा सामेल गरेका छौं । संविधान संशोधन गरेर हाम्रो निशान छापमा राखेका छौं । अहिले केही मान्छेहरुलाई त्यो जमिन फिर्ता आउला कि भन्ने डर छ । अहिलेको यो हल्लाखल्ला अरु केही होइन । यो सरकार रह्यो भने त्यो जमिन फिर्ता ल्याउँछ । त्यो जमिन भरसक फिर्ता आउन नपाओस्, आउन पायो भने अहिलेको सरकार लोकप्रिय हुन्छ भन्ने पिर केहीलाई परेको छ, त्यस्तो चिन्ता केहीलाई छ । आफ्नो उचाइ घट्ने हो कि भन्ने चिन्ता त्यस्ता केहीलाई छ । त्यस्ता मान्छेहरुले नै अनेक प्रकारका दुष्प्रचार गरेर सरकारले केही काम गरेन भन्दै हल्ला चलाउने, केही पनि भएन भन्ने हल्ला चलाउने र सरकार परिवर्तन हुँदैछ भन्ने हल्ला चलाउने र जनताको मनमा देशमै चिन्ता छाउने खालको वातावरण बनाउने काम गरिरहेका छन् । तिनले सुनियोजित रुपमा त्यस प्रकारका कामहरु गरिराखेका छन् । तर, म तपाईंहरुलाई ढुक्क रहनुहोस् भन्न चाहन्छु ।
मैले चीनतिरबाट पनि नाकाहरु/बाटाहरु खोल्ने नीति लिएँ र पहिलोपल्ट सरकारको नेतृत्व गर्दा हामीले चीनसँग यातायात र पारवहन सम्झौता ग¥यौं, पहिलोपल्ट म प्रधानमन्त्री हुँदा त्यसो ग¥यौं । नाकाबन्दीविरुद्ध हामी लडेर सामना ग¥यौं, नाकाबन्दी हामीले खोलायौं । चीनतिरबाट थुप्रै नाकाहरु खोलायौं । सन्धि–सम्झौताहरु ग¥यौं र हाम्रो देशको विकासका लागि हाम्रा दुबैतिरका छिमेकीहरुसँग मित्रतापूर्ण सम्बन्ध कायम राख्ने र विकासको कामलाई दुबैतिरको साथ, सहयोग र सहकार्यमा अगाडि बढाउने नीति लियौं । मान्छेहरुले यो हुन्छ भन्ने विश्वास गरेका थिएनन् । तर, यो भएपछि केही मान्छेहरु आत्तिए । अहिले पनि तिनीहरु आत्तिएको मात्रै हो । त्यसकारण म तपाईंहरुलाई ढुक्क रहनुहोस् भन्न चाहन्छु ।
मलाई काठमाडौं मात्रै बसेँ पनि पुग्थ्यो, यहाँ नआएपनि पुग्थ्यो । अस्ति भर्खर म किमाथाङ्का गएँ । बाटो कस्तो बन्दैछ, कसरी बन्दैछ, के हुँदैछ ? चीनसँगको त्यो हाम्रो यस्तो अर्को नाका हो, जो धेरै उचाइमा जानुपर्दैन र थोरै उचाइमा सधै चल्नसक्छ । यस्तै २३÷२४ सय मिटरको उचाइमा रहेको छ । त्यति कम उचाइको सधैँ चल्ने बाटो किमाथाङ्का करिडर अरुण नदीको किनारैकिनार बनिरहेको छ । हामी तमोर नदीको किनारैकिनार अर्को बाटो पनि खोल्दै छौं । पश्चिमतिरबाट पनि थुप्रै नाकाहरु खोल्दै छौं । त्यसकारण उत्तरी भेगका गाउँहरु पनि अब दुर्गम होइनन् । चीनदेखि दक्षिणसम्म यी सबै बाटोले जोडिन्छन् र हामी केही वर्षभित्र यी बाटोहरुलाई पक्की बाटोका रुपमा विकास गछौं । यसरी अब देश विकासको बाटोमा अघि बढेको छ । तपाईंहरुले बुनेका गलैँचाहरु अब मान्छेले बोकेर होइन, गाडीले बोकेर बजारसम्म पु¥याउनेछ । केही समय मात्रै हामीले यसको प्रतीक्षा गर्नुपर्छ । यसरी कामहरु हुँदै गरेको, निर्माण कार्य ेहुँदै गरेको, बाटाका ट्रयाकहरु खोल्दै गरेको तपार्इंहरुले देख्नुभएको छ । बाटोको स्तरोन्नति गरेको पनि तपाईंहरुले देख्नुभएको छ । मैले धेरै भनिरहनु पर्लाजस्तो लाग्दैन । तपाईंहरु ढुक्क हुनुहोस्, देश अगाडि बढ्छ ।
म हाम्रा युवाहरुलाई भन्न चाहन्छु, तपाईंहरुले सही बाटो लिनुपर्दछ । विकासको बाटो लिनुपर्दछ । आआफ्नो ठाउँको विकास कसरी गर्ने ? कसरी अगाडि बढाउनु पर्दछ ? एउटा नमूना त हाम्रो याङजुङ शेर्पा नै हुनुहुन्छ, जसले यस दुर्गम ठाउँमा जन्मिएर यस ठाउँको विकासको लागि फाउन्डेसन निर्माण गरेर विभिन्न ढंगले काम अगाडि बढाइरहनु भएको छ । मलाई आज अलिक माइत आएजस्तोजस्तो पनि लागिरहेको छ । कोेसेली दिएर पठाउन खोजेकोजस्तो देख्छु । तर यो फेरिफेरि आइरहोस् भनेर हो कि के हो ? हामीहरुलाई यस्ता कोसेलीहरु धेरै नदिए राम्रो हुन्थ्यो ! धेरै कोसेली नदिए नै राम्रो हुन्थ्यो ! उता बस्न मन नलागेर फेरिफेरि आइरहुँजस्तो लागिरह्यो भने…! त्यसैले कोसेलीहरु अलि धेरै नदिए हुन्थ्यो । खैर, म सबै साथीहरुलाई धेरैधेरै शुभकामना भन्न चाहन्छु । तपाईंहरुकोे ल्होसारजस्ता चाडहरुको अवसरमा शुभकामना दिन चाहन्छु । सबै स्वस्थ रहनुहोस्, उन्नति र प्रगति गर्नुहोेस् । हाम्रा बालबालिकाहरुको पढाइ राम्रो होस् । गुरुबा, गुरुआमाहरुले राम्रो पढाउनुहोस् । राम्रो पढाउन ध्यान दिनुहोला । र, बालबालिका, साना नानीहरुलाई म आग्रह गर्न चाहन्छु, मेहनतसाथ पढेर देशका लागि भविष्यमा केही गर्नुपर्छ । यस्तै दुर्गम ठाउँमा जन्मिएका मान्छेहरु सङ्घर्ष गरेर अगाडि बढेका हुन्छन्, सङ्घर्ष र कठिनाइ बुझेका हुन्छन् र उनीहरुले देश विकास गर्ने कुरामा झन् ठूलो र झन् धेरै योगदान गर्न सक्छन् । कठिनाइको सामना गरेर अगाडि बढ्न सक्छन् । तपाईंहरु सबैलाई म आग्रह गर्न चाहन्छु, अगाडि बढ्ने अठोट गर्नुहोस् । अगाडि बढ्न र देश विकास गर्न सम्भव छ । दुर्गमलाई सुगम बनाउन सकिन्छ । दुर्गमको बेग्लै महत्व हुन्छ । सहज बनाएर यसको महत्व यति नजिक हिमाल देखिन्छ, सजिलै यति नजिकैबाट हेर्न सकिन्छ । यो असाधारण सुन्दर कुरा हो । यसलाई हामी आवागमन गर्न सहज बनायौं भने यो पर्यटनको लागि बहुतै राम्रो ठाउँ हुन्छ । यसनिम्ति तपाईंहरुका माग मैले हेरेको छु ।
धन्यवाद ! (रासस)